Uwe mgbede maka agbamakwụkwọ maka nne nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ
Nkwenye siri ike nke uwe kwesịrị ịbụ nne nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ, ee e. Otu ihe doro anya - ọ dị mkpa ka ndị nne na nna, dị iche na ndị lụrụ ọhụrụ, na-eleba anya, ndị dị mma na ndị ruru eru.
Uwe ejiji maka nne nke nwunye
Uwe ejiji . A ga - enwe mmeri nhọrọ. Ogologo uwe ahụ kwesịrị ịdịkarịa ala ruo etiti iji kpuchie ikpere. N'ihi na ndị inyom nọ na afọ ịchọta ihe nwere ike ịbụ ikpe na - eji aka - ha ga - enyere aka zoo ezighi ezi nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọzọkwa, agba dị iche iche ga - enyere aka: abstraction, geometric or animalistic prints. Ọ dị mkpa ịhapụ uwe na nnukwu okooko osisi na-egbukepụ egbukepụ - ha na-eme ka ọnụ ọgụgụ ahụ dịkwuo ma na-elezi anya.
Uwe ogologo . N'ezie, na nke a, ọ bụghị banyere ọmarịcha ejiji "nwa-nwanyi." Uwe akwa n'ala n'ihi na nne nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ na-enwe ọtụtụ okpukpu abụọ, site na ihe ndị na-asọ asọ, na anụ ahụ, dị mfe n'ịkpụchasị, ma nke a na-eji akwa na-egbuke egbuke.
Uwe bụ opi ma ọ bụ onye na-eje ozi . Ihe nlereanya, ịgbasa n'okpuru ebe a dị ka ọdụ azụ, ga-ejikọta ụmụ nwanyị na-eto eto n'elu etiti ma dị mma. Biko rịba ama na ala kwesịrị ịdị mma n'anya ma dị mfe, mgbe ahụ, ntụsara ahụ, ụfụ, ma ọ bụ ogologo oge adịghị mma. Ogologo ya nwekwara ike imeghari: "onye na-eje ozi igwe" - ọ bụghị uwe na ala, ọ nwere ike inwe ogologo oge.
Uwe abụọ . Ekike ọzọ ga-enye aka, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ọgụgụ ahụ. Dịka, ihe nlereanya ahụ bụ otu ihe dị mfe nke na-atụgharị ihe mkpuchi dịka elu, ejiji ma ọ bụ zuru ezu n'elu. Enwere ike ịhụ ụdị uwe a site na:
ihe dị iche na nha na njupụta nke ihe;
nnukwute ihe mma nke akụkụ elu ya na ihe ndị a na-achọ mma (kpụbịakọta, rhinestones, embroidery, ụta na ndị ọzọ);
agba (ụda ala, na elu - agba ma ọ bụ ntụgharị).
Lee ezigbo uwe mgbede maka nne nwanyị a na-alụ ọhụrụ ya na corset na-akpa akwa na uwe mwụda. Ihe nlereanya dị otú a ga-abụ nke kachasị mma na-adọta uche na, n'otu oge ahụ, lee anya dị egwu ma dị nsọ.
Ụcha nke ejiji mara mma maka agbamakwụkwọ maka nne nke nwunye
Na agba ojii, ọ bụ naanị ọnọdụ mberede. N'ọlụ agbamakwụkwọ ahụ, ọ ga-ele anya nke ọma na ma e wezụga ị gbakwunye gị afọ ndị ọzọ. Nye ezigbo mmasị na àgwà dị mma: ọdụm, orchid na-egbuke egbuke, sapphire miri emi, blue-blue, salmon, coral and similar. Nhọrọ mmeri bụ agba nke mocha .
Agbamakwụkwọ maka Nwunye ahụ
Ịchịkọta agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ 2014
Uhie ejiji maka agbamakwụkwọ nke enyi nwanyị
Uwe Akwa Uwe Vivienne Westwood
Agbamakwụkwọ maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Na-agba ume mgbe a na-amụ nwa
Freshener ụgbọ elu maka ụlọ mposi
Jelii si quince
Lizobakt - ntuziaka maka iji n'ime ime
Karịa ọla ọcha dị ọcha?
Gịnị mere na ọ dịghị onye hụrụ m n'anya?
Nwa agbọghọ Jim Carrey kwadoro onwe ya?
Nlegharị anya ndị inyom
Kedu ka esi pịnye loops na ọnụ?
Planetarium nke Johannesburg
Nwanyi ọla edo n'olu
Kedu ihe nrọ na-ezu ohi?
Nchikota nke agba n'ime ime ime ụlọ
Costa Rica - ebe nkiri
Atheroma wepụ site laser